4 echiche iji mepụta AKWKKWỌ AKW ORKWỌ MA Ọ B M AKW |KWỌ | Crafts Na
Na nke a nkuzi anyị na-akụziri gị 4 echiche dị iche iche ka ị nwee ike ịmepụta nke gị ibe edokọbara o ibe edokọbara, zuru oke maka laghachi na klaasi. Enwere ha maka ihe uto nile, mara nma, obi uto, umuaka ... Anyị na-enye gị echiche ma ị kpebie ịhazi ha na agba na aghụghọ kachasị amasị gị.
2.1 Echiche 1
2.2 Echiche 2
2.3 Echiche 3
2.4 Echiche 4
Ime ihe ibe edokọbara o ibe edokọbara ị ga-achọ iche iche ihe maka echiche ọ bụla. N'okpuru ebe ị nwere ndepụta nke ha wee hụ ndị a na-eji na nhazi ọ bụla.
Akwụkwọ a na-edozi
Na nke na-esote video-nkuzi ị pụrụ ịhụ n'ụzọ zuru ezu na usoro nhazi nke ọ bụla n'ime ibe edokọbara, ị ga-ahụ na ha niile dịcha mma mfe ma chọpụta ihe ndị e ji mee ihe.
Cheta na nzọụkwụ ịgbaso echiche nke ọ bụla ka ị ghara ichefu nke ọ bụla.
El pointer magnetized ọ dị oke irè ma nwee uru na ọ gaghị amị amị n'etiti ibe akwụkwọ nwere ike tufuo ya. A na-ejikọta akụkụ abụọ ahụ nke ọma na magnet ma ị nwere ọtụtụ puku mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ iji nye ha aka gị.
Bee a mpempe akwụkwọ nke 3x20cm.
N'ogige atụrụ rektangulu na ọkara.
Ghichaa magnet na njedebe nke ọ bụla.
El tassel ibe edokọbara na-agbakwunye aka mara mma na akwụkwọ ahụ. Nwere ike ime ka tassel ahụ dịkwuo elu ma ọ bụ na-erughị ala dabere na eri ma ọ bụ ajị ị na-eji, echefukwala ijikọ agba ya na ụda nke ibe edokọbara.
Bee a rektangulu 5x10cm.
Bee nkuku na onu ogugu.
Mee oghere n'otu isi na oghere ọkpọ.
Gburugburu mpempe kaadiboodu na ajị anụ.
Wepu mpempe kaadiboodu.
Gafere otu ajị anụ n’etiti okirikiri ị mere.
Gburugburu elu ahụ na ajị anụ.
Bee mkpụrụ osisi fringes.
Jide tassel na ibe edokọbara.
Echiche nke pointer ya na rịbọn na bọtịnụ okwesiri imeghari nke oma dika akwukwo, ya mere o nwere oke. Ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ buru ibu karịa, enweghị ike imechi ya, ma ọ bụrụ na ọ pekarịrị ntakịrị, ibe edokọbara ga-atọghe. Mgbe ọ bụ nke zuru oke, ọ dị oke mma achọ mma.
Bee otu rịbọn.
Nyefee teepu ahụ n'ime eriri roba.
Mechie teepu site na gluu onu ya na silicone di oku.
Ghichaa bọtịnụ na nkwụsị nke ị glued.
A ikpeazụ echiche nke Bookmark na ígwé ojii A na-ejikarị ya eme ihe maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ, n'agbanyeghị na ị dabere na ịmebe ị mere, enwere ike iji isi ya maka ọtụtụ ụdị ibe edokọbara.
Detuo square 3 nke 7x7cm n'ụdị L, dịka ị hụrụ na vidiyo.
Detuo diagonal na ngwụcha square, wepụ ahịrị n'èzí.
Beechapụ ọdịdị ahụ ị sere.
Gbanye triangles n'ime square.
Ghichaa otu triangle na nke ọzọ.
Bee ọdịdị igwe ojii site na ụfụfụ ahụ.
Gbanye igwe ojii na ibe edokọbara.
Detuo ihu na ihe nrịbama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts na ihe » Ọrụ nka » 4 Echiche iji mepụta BOOKMARKS Ma ọ bụ BOOKMARKS
Achọpụtala m na ị naghị etinye ego na weebụsaịtị gị, egbula azụmahịa gị, ị nwere ike irite ego ọzọ kwa ọnwa n'ihi na ị nwetara hi
ọdịnaya ọdịnaya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata etu esi emekwu ego,
chọọ maka: ndụmọdụ Boorfe kachasị mma adsense ọzọ
Esi mee ka ibe edokwubara dị mfe
Ihe ịchọ mma ọkọlọtọ maka ndị ọzọ